Senior Loan Officer | Hayman Capital Microfinance Co,Ltd
၁။ အရောင်းမြှင့်တင်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း - တိုက်ရိုက်အရောင်း မြှင့်တင်မှုဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အခြားဈေးကွက်ရှာဖွေ လုပ် ဆောင်ခြင်းများကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ခြင်း။
၂။ လျှောက်ထားခြင်း - အရည်အသွေးစံနှုန်းများကို သေချာ စီစစ်ခြင်း၊ချေးငွေလျှောက်လွှာများကိုရယူခြင်းနှင့် ဖောက်သည် များနှင့် ချိန်းချက်မှုများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၃။ အကဲဖြတ်စီစစ်ခြင်း - ဖောက်သည်များ၏ မိသားစုနှင့် လုပ်ငန်းများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် ချေးငွေကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ အာမခံသူများ၏ ခန့်ထားသော အလုပ်သမားများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ သွားရောက် ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့်ချေးငွေအကဲဖြတ်စီစစ်ခြင်းကို MFI ၏ ချေးငွေမူဝါဒနှင့် အညီပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၄။ အဆိုတင်ပြခြင်း - ချေးငွေကော်မတီသို့ ချေးငွေအဆိုပြု ချက်များကို တင်ပြပေးခြင်း။
၅။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - ချေးငွေကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ နှင့် ပတ်သက်၍ ဖောက်သည်များအား အကြောင်းကြားခြင်း။
၆။ ငွေထုတ်ပေးခြင်း - ဘဏ်ရုံး၊ ဖောက်သည်တို့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ငွေထုတ်ပေးခြင်းများ စီမံဆောင် ရွက်ခြင်း
၇။ နောက်လိုက်စီစစ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်း - ချေးငွေ အရာရှိသည် မိမိထုတ်ချေးငွေအပေါ်တွင် အပြည့်အ၀ တာ ၀န်ရှိသည်၊ ချေးငွေများ အချိန်မှီပေးသွင်းရန်အတွက် သေချာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်၍ ချေးငွေများကို MFI’s software အတိုင်းနောက်လိုက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဖောက် သည်များ ထံသို့ဆက်သွယ်ခြင်း၊ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း များ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အကယ်၍ ပြည်လည်ပေးသွင်းမှု နောက်ကျခြင်းများဖြစ်ပါက ချေးငွေအရာရှိသည် ချက်ချင်း ဆောက်ရွက်ရမည်မှာ ဖောက်သည်အား ဆက်သွယ်ခြင်း၊ အာမခံသူအားဆက်သွယ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့သွားရောက် ခြင်းနှင့် ချေးငွေအပြည့်အ၀ပြည်လည်ပေးသွင်းမှု မပြီးမခြင်း တရားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ကူညီလုပ် ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ချေးငွေအရာရှိသည် အမြဲတမ်း MFI ၏ ချေးငွေမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ကိုက်ညီစွာလုပ်ဆောင်ရန် တာ ၀န်ရှိသည်။
၉။ ချေးငွေကော်မတီသို့ မတင်ပြမှီ ချေးငွေအရာရှိသည် လိုအပ်သောချေးငွေလျှောက်လွာ ပုံစံများအားလုံးကို ပြည့်သွင်းရေးသားရမည်ဖြစ်သည်။
၁၀။ မိမိ၏ချေးငွေယူထားသော ဖောက်သည်များ၏ လက်ရှိကာလ ငွေကြေးအခြေအနေနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခြေ အနေများကို အမြဲတမ်းသိရှိနိုင်ရန် ချေးငွေအရာရှိသည်ပုံမှန် ဖောက်သည်များအား သွားရောက်လည်ပတ်စစ်ဆေးခြင်း များ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၁။ ချေးငွေအရာရှိသည် ပြသနာရှိနိုင်ချေးငွေများကို သိသိချင်း ချေးငွေအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် ရုံးခွဲမာန်နေဂျာထံ သို့ ချက်ချင်းအစီရင်ခံတင်ပြပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
၁၂။ ချေးငွေကော်မတီ (သို့မဟုတ်) ချေးငွေပြည်လည်ရရှိ ရေးကော်မတီတွင် ပါဝင်သောချေးငွေအရာရှိသည့် ၄င်း၏ ပါဝန်လုပ်ဆောင်မှုသည် တက်ကြွ၍ အပြုဘောဆောင် ရမည်၊ စေ့စပ်သေချာရမည်၊ မှန်ကန်သည့်စိတ်သဘောထား ရှိရသည်
၁၃။ ချေးငွေအရာရှိသည် သတ်မှတ်ထားသော အရည် အတွက် များ အားလုံးပြည့်မှီအောင် လုပ်ဆောင်ရ မည့် တာဝန် ရှိသည်။
၁၄။ ချေးငွေအရာရှိများသည် MFI’s ၏ ပြဌာန်းထားရှိသော ပြုမူဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရ မည်။ ဖောက်သည်များနှင့် လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များအား သတ် မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းအတိုင်း ဆက်ဆံရမည်။ ထို့အတူ စည်းမျဉ်းများ ချိုးဖောက်မှုတွေ့ရှိပါက မိမိ၏ ကြီးကြပ်ရေးမှု ထံသို့ အကြောင်းကြားရမည်။
၁၅။ သက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာမှ လိုအပ်၍ ပေးသော အခြား တာဝန်များအား ဆောင်ရွက်ရန်။
၁၆။ ပြသနာများကို ဖြေးရှန်ရန်နှင့် ၄င်းပြသနာများအား ချက်ခြင်းဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာသို့ အကြောင်းကြားရမည်။
၁၇။ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရမည်။
၁၈။ မိမိ၏ဖောက်သည်များအား အရည်အသွေးမြင့် ကောင်းမွန် သော ၀န်ဆောင်မှုများပေးရမည်။
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတက်ပြီး Microsoft Word နှင့် Excel အသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရမည်။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိသူဦးစားပေးမည်။
မြန်မာဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ အသင့်အတင့် ရေးတတ် ပြောတတ်ရမည်။
နေရာသေသမရွေးသွားရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရပြီး ချမှတ်ထားသည့်နေရာများတွင် တစ်ဦးတည်းလွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ချမှတ်ထားသည့် နေရာများတွင် တစ်ဥိးတည်း Marketing ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီပြီး အသက် ၃၀ မကျော်သူဖြစ်ရမည်။
၇၅ % ရုံးတွင်းပြင်ပတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
Mon to Fri (8:30 AM to 5:30 PM)
Sat, Sun and Public Holiday (Off)
Our main shareholder is Hayman Capital Pte. Ltd – Singapore-based Investment Company.
Loan Officer IME International Co.,Ltd Junior Loan Officer Hayman Capital Microfinance Co,Ltd Accountant ITM Group of Companies Government Relation Executive (Or) Supervisor Win Brothers Group of Companies Limited Senior Accountant GRAND SIRIUS COMPANY LIMITED Accountant Golden Legend Group Internal Auditor Myanmar Awba Group Cost Accountant Robin Johnson Engineering (RJE Myanmar) Transaction Officer Maha Agriculture Microfinance Accountant Industry Leading Company Financial Analyst/ Assistant Finance Manager Solar Home Myanmar Senior Accountant(Shwe Pyi Thar) Industry Leading Company